Haddii aad doonaysid inaad wax barato | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad doonaysid inaad wax barato
Waxaad wax u baran kartaa qaabab badan oo kala duwan. Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa khuseeya adigaaga doonaya inaad wax baratid. Halkan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan taageerada bilaabida waxbarashada.
Haddii aad doonaysid inaad wax baratid, haysatid sharciga deganaansho oo ku jirtid diiwaan-gelinta dadweynaha ama geli doona diiwaan-gelinta dadweynaha, waxaad halkan ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan nooca fursadaha kala duwan ee aad haysato.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan waxa dugsiga dadka waaweyn yahay.
Nooca kaalmada iyo amaahda aad codsan karto waxay ku xirantahay da'daada iyo nooca heerka aad wax ku barato.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan kaalmada iyo amaahda CSN